Ku soo dhawow Ururka Kaalmada Sharciyeed ee (Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.) Waxaan bixinnaa macluumaad sharciyeed oo bilaash ah, talo iyo matalaad aan mataleyno dadka aan iska bixin karin qareen.
Waxaan caawino sharciyeedd ka bixinnaa deegaannada soo socda, ee ku dhexyaala gobolka New York:
Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, Otsego
Daawo fiidiyow ku saabsan kaalmada sharciyeed
Halkaan waxaa ah tusaalooyin dhowr ah ee dhibaatooyinka sharciyeed ee laga yaabo in aan awoodno in aan caawino ka bixinno:
-Dhibaatooyinka macaamiisha, sida dhibaatada deynta ;
-Dhibaatooyinka shaqada, sida takooridda shaqada ama mushaar aan caddaalad ahayn ;
-Dhibaatooyinka iskuulka, sida caawino aan iskuulka ka siinno carruurta naafonnimada qaba ;
-Dhibaatooyinka qoyska, sida furriinka, haynta carruurta, lacag ku taageeridda carruurta, taageeridda xaaska iyo waxyeellada guriga ka dhex dhacda ;
-Dhibaatooyinka helidda caymis caafimaad ama adeegyo daryeel caafimaad ;
-Dhibaatooyinka guriyeynta, sida guri iska saaridda, guriga kala wareegidda, iyo in milkiiluhu sameeyo dayactirro ;
-Manfacyada dadweynaha, sida kaalmada dadweynaha, kaarka cuntada, Nabadsugidda Bulshada, SSI, shaqo la’aanta iyo manfacyada kale ;
-Dhibaatooyinka socdaalka, sida helidda muwaadinnimada U.S ;
-Dukumentiyada sharciyeed, sida wasaayada dardaaran (Wills), iyo awood wareejinta (Power of Attorney).
Kuguma matali karayno xaajo dumbiilanimo, ama kaama caawin karayno tikidka baabuur wadidda lagugu siiyo. Haddii lagugu soo oogo dembi, la xiriir xafiiska difaaceyaasha dadweynaha ee xaafaddaada.
Arrimaha badankood, waxaan caawin karaynaa oo keliya dadka dakhligoodu hooseeyo. Si kastaba ha ahaatee, haddii da’daadu tahay 60 ama ka weyn, ama aad tahay dhibbane waxyeello guriga gudihiisa ka dhacday, waxaa laga yaabaa in aad u qalanto xataa haddii uusan dakhligaagu hooseynin.
Si aad caawino uga heshid barnaamijkeenna, waxaad nagu soo mari kartaa mid ka mid ah xafiisyadeenna. Waxaan ku keeni donna turjumaan tababaran, oo bilaash ah oo ku soo hor fadhiista ama telefoonka kaaga turjuma markaad na soo booqato.
Waxaad sidoo kale bilaash nooga soo wici kartaa lambarka 1-877-777-6152. Qofka macluumaadka ugu horreeya kaa qaadaya u sheeg luqaddaada. Waxaa laga yaabaa in telefoonka dhowr daqiiqo kor u haysid oo sugtid, inta aan kugu xireyno turjumaan.
Maraykanka oo dhan, maaliyaddii loogu talogalay kaalmada sharciyeed waa la gooyey. Waxaan leennahay qareenno aad u tiro yar oo noo shaqeeya. Tan awgeed, ma awoodno in aan u adeegno dadka caawinada na weydiisanaya oo dhan. Waxaa laga yaabaa in aannaan awoodin in aan arrinkaaga qaadanno.
Waxaan marka hore caawinnaa dadka xaaladda degdegta ah ay haysato. Tusaalooyinka xaaladaha degdegta ah waa waxyeello qoyska ka dhex dhacda, guri iska saarid ama waayidda manfac. Waxaa laga yaabaa in uu jiro taxane sugitaan ee arrimaha kale.
Haddii aan qaadan weyno arrinkaaga, waxaan ku siin doonnaa macluumaad ku saabsan hay’adaha kale ee laga yaabo in ay kaa caawiyaan.
Wax ka baro xuquuqahaaga sharciyeed.